कोरोनाको भ्याक्सिन पाईएन भनेर आँत्तिनु पर्दैन : कुमारप्रसाद दाहाल | दर्पण दैनिक
कोरोनाको भ्याक्सिन पाईएन भनेर आँत्तिनु पर्दैन : कुमारप्रसाद दाहाल
बुढानिलकण्ठमा ५१ हजार ५ सय ८२ जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए
प्रकाशित मिति: २०७८ श्रावण २६ गते ०९:३८
केशर विश्वकर्मा, काठमाडौं । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा हालसम्म ५१ हजार ५ सय ८२ जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाई सकेका छन । तीमध्ये कोभिसिलको पहिलो मात्रा पूरा गर्ने ५ हजार ५ सय २० जना, भेरोसिलको दोश्रो मात्रा पूरा गर्ने २९ हजर २ सय ४४ जना, जनसन एण्ड जन्सन लगाएका ७ हजार २०० जना र भेरोसिलको पहिलो मात्रा पूरा गर्ने ९ हजार ६ सय २८ जना रहेका छन् ।
१८ वर्षभन्दा माथीका ५० प्रतिशतले खोप लगाएको भएपनि अझै लगभग ४१ हजार व्यक्तिहरुले खोप लगाउन बाकी रहेको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । बाहिरबाट आएका, नागरिकता वा कुनै पनि परिचय पत्र नभएका व्यक्तिहरुलाई घरबेटीको सिफारिस वा वडाको सिफारिसका आधारमा खोप लगाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको पनि दाहालले बताए । त्यस्तै, यस नगरपालिकामा अवस्था अनुसार खोप केन्द्रहरुको व्यवस्था मिलाएको र केही समय अगाडी ८ वटा केन्द्रहरहरुबाट खोप लगाईकोमा हाल ४ वटा केन्द्र मात्रै सञ्चालन गरेको साथै आवश्यक परे १३ वटै वडाबाट खोप लगाउन मिल्ने वातावरण बनाउने जनस्वास्थ्य अधिकृत दाहालले बताए ।
खोप केन्द्रहरुमा आफ्ना मान्छेहरुलाई बिना लाईन छिराएको तथा लाईन बस्नेहरुले खोप नपाएको भन्ने जनगुनासो आएको छ, तपाईंहरु अनुगमन किन गर्नुहुन्न भन्ने दर्पण दैनिकको प्रश्नमा अधिकृत दाहाल भन्छन्, 'मैले पनि विभिन्न ठाउँमा यस्ता गुनासोहरु सुनेको छु । यस नगरपालिकामा समय भएसम्म म आफैं अनुगमनमा जान्छु । समय अभाव भएको बेला मेरा स्टाफहरुलाई अनुगमनमा पठाएका छौँ । हामीले त्यस्तो प्रकारको व्यवहार पाएनौं ।' अर्को कुरा खोपको जिम्मा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा जनप्रतिनिधिलाई नै पूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । यसकारण पनि कहिँ कतै छिटपुट रूपमा आग्रही-पूर्बाग्रही, नातावाद-कृपावाद भएको हुन सक्छ । प्रायः सबै पालिकामा नै यस्ता प्रवृति बढेको छ । मान्छेको नियतै खराब भएपछि यस्तो प्रकारको प्रवृति कम गर्न निकै गार्‍हो हुन्छ । त्यसका लागि कम गर्न मैले यस नगरपालिकामा नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्ने कोशिश गरिरहेको छु । तर मैले मात्रै कोशिश गरेर हुँदैन, स्थानीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ र साथ दिनुपर्छ ।
कुमारप्रसाद दाहाल - जनस्वास्थ्य अधिकृत, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
खोप मात्रै यो महामारीबाट बच्ने उपाय नभएको बताउँदै दाहाल भन्छन्, 'यो महामारीबाट वचन भ्याक्सिनले मात्रै होईन । एकपटक लगाएपछि यसले छ महिनासम्म मात्रै काम गर्छ । त्यसपछि पुनः लगाउनु पर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पनि आपतकालीन अवस्थामा महामारीबाट बच्न र केही न्यूनीकरण होस् भनेर खोप लगाउन भनेको हो । यस्ता कुराहरू आम सर्वसाधारणले बुझ्न जरुरी छ ।'
अधिकृत दाहाल थप्दै भन्छन्, 'मानिसलाई ५० थरीका सरुवा रोग लाग्छन । तीमध्ये कोरोना एक हो । के कोरोना (कोभिड नाईन्टीन) बाट बच्नु मात्रै संसार जितेको हो त ? उनी प्रश्न गर्छन् र भन्छन् मैले भन्न खोजेको अन्य विभिन्न जनावरबाट पनि त रोग लाग्छ नि। ती कुराहरूबाट पनि बच्न आवश्यक छ । फेरि भ्याक्सिन लगाएका मानिसना पनि त पोजेटिभ देखायो नि । त्यसकारण यसको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भयो । त्यसैले आँत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । इतिहाँसलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक १० वर्षमा कुनै न कुनै प्रकारको महामारी आउने गरेको र ती महामारी पनि प्रायः दुई वर्षसम्म रहेको पाईन्छ । यो कोरोना पनि अब छ महिना पछि साम्य हुँदै जान्छ ।'
कोरोना खोप लगाएपछि केही व्यक्तिलाई साईट इफेक्ट पनि देखाएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको जो मानिस दीर्घ रोगी छ त्यस्ता व्यक्तिलाई साईट इफेक्ट देखिएको हो । कुनै बेलामा व्यक्तिको ज्यान अनुसार यस्तो हुने गर्दछ । कोरोनाको कारण मात्रै मृत्यु भयो भनेर समाचार तथा रिपोर्ट आउने गर्दछ । तपाईं यसमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन, 'कोरोनाको कारणमात्रै मृत्यु भएको होईन । अन्य रोगहरुबाट ग्रसित व्यक्ति जब अस्पतालमा जान्छ तब उसलाई त्यहाँ अन्य कोरोना संक्रमितबाट कोरोना संक्रमण वा कोरोना सर्दछ । त्यसपछि उसको रिपोर्ट कोरोना पोजेटिभ देखाउछ । कथमकदापी उसको मृत्युु भयो भने कोरोना कारण भनेर आउनु स्वाभाविक हो । किनकि उसको रिपोर्ट कोरोना पोजेटिभ देखिएको हुन्छ । त्यसैले सामान्य अवस्थाका बिरामी अस्पताल गएर चेक गराइरहनु पर्दैन । कोहीबेला मिक्स इफेक्टका कारण पनि मानिसको अस्पतालमा गएपछि मृत्यु हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा त मानिसको मानसिक तनाव, मानसिक डर, भय आदिका कारण पनि मृत्यु हुन थालेको छ ।'
अन्तिममा सरकरलाई आरोप लगाउदै उनी भन्छन जनतालाई भ्याक्सिनको बारेमा राज्य वा सरकारले सही सूचना दिएको छैन । राज्यले यो भ्याक्सिनले यति महिना काम गर्छ, यो भ्याक्सिनले यति महिना काम गर्छ भनेर आम सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पारिदिनु पर्छ । यस्तो महामारीको बेलामा सरकारले जोखिमसम्बन्धि सूचना बारम्बार दिनुपर्ने तर अहिले त्यो नभएको जस्तो लाग्छ । सही सूचना पटकपटक दिए आम जनमानसमा भएको भय कम गर्न सकिन्छ ।
(बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत दाहालसँगकाे कुराकानीमा आधारित)
गीत तथा गजल लेखनमा पनि उत्तिकै माहिर मोडल सन्ध्या सानु
२०७८ भाद्र २८ गते ०९:३७
रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर २ साविकको बाम्ती भण्डार गाविस वडा ५ की सन्ध्या सानु विगत केही समययता कलाकारिता क्षेत्रमा संघर्षरत प्रतिभा हुन । कला र साहित्यमा रुचि राख्ने सन्ध्या अहिले भने मोडलिङ क्षेत्रमा व्यस्त छिन् । २०७२ सालबाट निरन्तर यस क्षेत्रमा लागिरहेकी उनी गीत लेखन र गजल लेखनमा पनि उत्तिकै माहिर छिन । अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत सन्ध्याले मोडलिङ मात्रै गरेकी छैनन, उनले गीत पनि गाएकी छन । उनै मोडल तथा कलाकार सन्ध्या सानुसँग दर्पण दैनिकका लागि केशर विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
जनतालाई प्रलोभनमा पारी नियम विपरीत काम गर्नेलाई छाडिन्न : उद्ववप्रसाद खरेल
२०७८ भाद्र २ गते १०:११
केशर विश्वकर्मा, काठमाडौं । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख उद्ववप्रसाद खरेलले आफ्नो नगरपालिकाभित्र कसैको दबाब र प्रभावमा परेर नियम विपरीत अहिलेसम्म कुनै पनि काम नगरेको बताएका छन् । उनले भने जनतासँग कुनै पनि लाभ लिएर होस या यो वा त्यो बहानामा अतिरिक्त रकम लिएर हामी काम गर्दैनौं । यस नगरपालिकाका कोही पनि जनप्रतिनिधिहरुले जनतासँग फाइदा लिएर काम गरे भने त्यो अपराध हो । त्यस्तालाई हामी सडकमा ल्याएर जनताले देख्ने गरी पछार्छौँ र कानुनी कार्बाही गर्छौं । कुनै पनि व्यक्ति, ठाउँ, नगर, शहर होस या राष्ट्रलाई हेर्ने धारणा सकारात्मक छ भने सबै चिज राम्रो हुने बताउँदै प्रमुख खरेलले थपे यस नगरपालिकामा कुनै प्रकारकाे भ्रष्टाचार भएको छैन ।